Top Adsense Isiokwu: Ajax, Flash, WordPress na Firefox | Martech Zone
Izu ole na ole gara aga, agbakọtara m Adsense na nchịkọta Google (Ntuziaka # 4). Enwere m mmasị na-ele anya na nsonaazụ. Nchịkọta Google nwere alzọ Mgbaru Mgbanwe Agbanwe ebe ị nwere ike ịhụ ụzọ ndị ọbịa na-etinye tupu ịpị mgbasa ozi ahụ. Iji ozi a, mmadụ nwere ike were echiche abụọ dị iche:
Enwere m ike ị nweta ego ma ọ bụrụ na m gaa n'ihu na-ede banyere isiokwu ndị a.
A na-achọsi ike maka ọdịnaya na mpaghara ndị a - nke mere na ndị folks dị njikere ịpị na mgbasa ozi iji nweta ya!
Naanị izu ole na ole nyocha n'okpuru eriri m, agaghị m agbanwe agbanwe ntụziaka na ọdịnaya nke blọgụ m naanị iji nweta ego mgbasa ozi ọzọ. Mana appears ọ dị ka ndị folks na-achọta blọgụ m wee hapụ ya site na njikọ mgbasa ozi mgbe ha anaghị achọta ozi ha chọrọ maka isiokwu ha na-achọ. Nke a bụ anya dị jụụ na stats na Gozọ Mgbaru Mgbanwe:
Isiokwu ndị ahụ? Ajax, Flash, WordPress na Firefox. WordPress bụ otu n'ime isiokwu 'na-ekpo ọkụ' na blọọgụ m yana ọtụtụ hits na WordPress akpado isiokwu karịa ebe ọ bụla ọzọ. Ana m arụ ọrụ na WordPress Sidebar Wijetị ugbu a ebe ọ bụ na ndị ahụ bụ ihe na-achọsi ike ma nwee ike ikpughe blog m na ndị ọzọ na-agụ.
Banyere Ajax, Flash, na Firefox… Aga m ahụ ebe m chọrọ iwere ndị ahụ. Abụ m onye ofufe Ajax mana enweghị m ọtụtụ ahụmịhe Flash (enyi m Bill nwere ọtụtụ karịa). Ma n'ezie m hụrụ Firefox n'anya, ọ bụ teknụzụ mgbakwunye, yana Firebug! Firebug bu na ngwá ọrụ mmepe dị mkpa maka onye nrụpụta Weebụ ọ bụla.
Ya mere… dee banyere isiokwu ndị ahụ iji gboo ọchịchọ ahụ ma ị nwere ike ịmekwu ego na-eme ya! Nchịkọta dị jụụ!
Zụta ma Ree Onyinye Kaadị n'Onlinentanet!
Nov 13, 2008 na 6:48 PM
Enwere m ebe nrụọrụ weebụ na-agba ọkụ
Ana m achọ edemede nke gosipụtara google adsense na flash.
kedu ka m ga-esi nweta ya?
Nov 17, 2008 na 2:23 PM